अमेजनमा शीर्षक र बुलेट प्वाइन्ट्स द्वारा उत्पाद प्रविष्टि कसरी अनुकूलन गर्ने हो?
अमेजनमा तपाईंको उत्पादनको कुल बिक्री अधिकतम गर्न भन्नुको आवश्यकता छैन, तपाईलाई सम्भावित सबै सम्भावित ग्राहकहरूलाई स्पुर दिन आवश्यक छ।. अन्ततः, तपाईंको उत्पादन सूचीमा रूपान्तरण दर सुधार गर्न र तपाईंको आय इत्यादि उत्पन्न क्षमतालाई उजागर गर्न. तर कसरी बिक्री गर्ने तपाईको अधिकांश वस्तुहरू त्यस भेडा बजारमा शीर्ष सान्दर्भिक खोज परिणामहरू बीच देखा पर्दछ? मलाई विश्वास छ कि तपाईंको व्यवसायिक सफलताको कुञ्जी त्यहाँ तपाईंको उत्पादन सूची अनुकूलनमा छ. र अमेजनमा तपाईंको उत्पादन सूची अनुकूलन गर्ने मुख्य भाग तपाईंको उत्पाद शीर्षक, विवरण र बुलेट प्वाइन्टहरूको सूचीमा पाइन्छ. सामान्यमा लिइयो, तपाइँसँग आफ्नो मुख्य लक्ष्य खोजशब्दहरू र लामो-टिम खोज वाक्यांशहरूमा सबै चीजहरू हुनु आवश्यक छ ताकि तपाई अमेजनमा तपाईंको उत्पादन सूचीमा सर्पको शीर्षमा देखाइएको राम्रो मौकाहरू छन्।. आउनुहोस् कि तपाई कसरी गर्न सक्नुहुनेछ.
अमेजनमा उत्पादन पृष्ठ सिर्जना गर्दै
आदर्श रूपमा, तपाईंले उत्कृष्ट उत्पादन विवरण पृष्ठमा तपाईँको वस्तुमा सही र संक्षिप्त विवरण दिनुपर्दछ ताकि अधिक सम्भावित ग्राहकहरूले आफ्नो अन्तिम निर्णय गर्ने निर्णय गर्दछन्। तिम्रो साथ एक खरीद. एक पटक फेरि, यो चीज हो कि तपाईको मुख्य कार्य यहाँ सही र ठिकै हुन सक्दछ - केवल किनकी ग्राहकहरु को ठीक छ कि तिनीहरूले किन जाँदैछन् हेर्न चाहन्छन्.
त्यसैले, अमेजनमा मानक उत्पादन पृष्ठको मुख्य घटकहरू छन्:
तपाईंको मुख्य लक्ष्य खोजशब्दहरूको लागि अनुकूलित उत्पादन शीर्षक.
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उत्पादन सुविधा / फाइदाहरू समावेश गर्ने पाँच बुलेटहरूको सूची.
उत्पाद विवरण जसले उत्पादनको मुख्य विशेषताहरू समावेश गर्दछ, रोजगारीको प्रयोग / रखरखावका तत्वहरू (वास्तवमा, यो तपाईंको बुलेट प्वाइन्टहरूको एक बढि विस्तारित संस्करण हो).
उत्पादन छविहरू, विस्तारमा प्रतिनिधित्व गर्दै प्रत्येक ग्राहक
अमेजनमा उत्पाद शीर्षक कसरी अनुकूलित गर्ने
यहाँ मुख्य आवश्यकताहरू छन्। अमेजनमा मुख्य लक्ष्य खोजशब्दहरूको लागि उत्पाद शीर्षक अप्टिमाइजेसन:
प्रत्येक उत्पादको शीर्षकमा मुख्य उत्पादन निर्दिष्टीकरण को लागी 200-वर्ण सीमा छ।.
प्रत्येक शब्दको पहिलो पत्र ठूलो हुनु पर्छ.
सबै संख्याहरू अंकहरूमा हिज्जे हुने हो.
अमरिकाहरू पनि हिज्जे हुनुपर्छ.
उत्पादन रंग / साइज त्यहाँ भेट्न वांछनीय छैन, जब सम्म उनीहरु साँच्चिकै प्रासंगिक विवरणहरू छैनन्.
उत्पाद मूल्य, मात्रा उपलब्ध, कुनै विक्रेता जानकारी, प्रचार सन्देश, वा कुनै अन्य सुझाव टिप्पणीहरू (जस्तै "बिक्रेता", "गर्म बिक्री," "राम्रो सम्झौता," आदि समावेश नगर्नुहोस्।. ).
बुलेट पोष्टहरूको सूची अनुकूलन कसरी गर्ने
यहाँ बुलेट मार्गको सूची अनुकूलन गर्नको लागी केहि उत्कृष्ट अभ्यासहरू यहाँ छन्:
बुलेट प्वाइन्टहरूको "आदर्श" सूची पाँच प्राथमिक कथनहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ जुन स्पष्ट रूपमा उत्पादको शीर्ष-महत्त्वपूर्ण विशेषताहरूलाई ग्राहक द्वारा विचार गर्न सकिन्छ, जस्तै निर्दिष्ट उत्पादन विशेषताहरू, आयामहरू, सामान्य वारंटी, आदि मा जानकारी.
प्रत्येक बुलेटको सुरुमा पूंजीकृत हुनु पर्छ.
प्रत्येक बुलेट भित्र व्यक्तिगत वाक्यांशहरू अर्धको साथ अलग हुन सिफारिस गरिन्छ.
सबै चीजको माप लाई स्पष्ट रूपमा हिज्जे नबिर्सनुहोस्.
तपाईंको उत्पादन शीर्षकको साथ धेरै मनपर्छ, यहाँ निम्न डेटा समावेश नगर्नुहोस्: प्रमोशन, मूल्य निर्धारण, कम्पनी, ढुवानी, वा बिक्री-विशिष्ट जानकारी - र तपाईले गरे Source .